လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြCommonနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းရောနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်သောကြောင့် (2016) ။ Eyal Matsliah သည် Orgasm Unleashed - Your Brain On Porn ကိုရေးသားသူဖြစ်သည်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြIssနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းရောနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်သောကြောင့် (2016) ။ “ Orgasm Unleashed” ကိုရေးသားသူ Eyal Matsliah
သငျသညျသော်လည်းထွက်တက်ကြွနေနှင့်သင့် t-Level စစ်ဆေးမှုများပါကစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ပတျဝနျးကငျြတဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် ပင်လွန်း porn ကိုကြည့်သည်။ ကူညီဖို့ဤပြဿနာကို, လိင်ကျွမ်းကျင်သူကျော်လွှား, Eyal Matsliah ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားသူတို့သင့်ကြောင်းကိုပြောတယ် ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbating ကြိုးစားကြ နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ဘယ်လောက်ထက်ပိုသောသဘာဝကိုနှိုးဆှမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး။
ဧပြီလ 26 လူနေမှုပုံစံစတဲ့
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကဘယ်လောက်ပူပြင်းလိင်ရှုပ်ထွေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရှုပ်ထွေးအသုံးပြုပုံ့နောက်ဆက်တွဲ, ချွေးဒါမှမဟုတ်ဘာအဝတ်အချည်းစည်းအလောင်းတွေအတူတူရလာသောအခါဖြစ်ပျက်ဆိုလိုဘူး - ငါကမြေတပြင်လုံးလုပ်ရပ်ဆိုလို။ မျက်နှာရန်ခက်ခဲတဲ့တကယ်တော့နှစ်ဖက်စလုံးကယ့်ကို (တကယ်!) တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရှိသည်ဖို့ချင်လျှင်ပင်, များစွာသောရှုပ်ထွေးရှိပါတယ်ပေမယ် ဘုံလိင်ပြဿနာများ သောလမ်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ပျက်။ မှ စောလွန်းပြီး သို့မဟုတ်သိပ်နောက်ကျဖို့ မတိုက်ဆိုင်လိင် drives တွေကိုပင်ပျော်ရွှင်စုံတွဲများ sensitivity ကို, သည်းခံခြင်းနှင့်ကောင်းစွာ, သည်းခံခြင်းနှင့်အတူအိပ်ခန်းပိုင်နက်သွားလာရန်ရှိသည်မည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျအောကျဖျောပွကိစ္စများမဆိုတွေ့ကြုံနေတယ်ဆိုရင်သင်နှင့်အတူဆက်ဆံနေသောအရာကိုတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတဦးတည်းအနေဖြင့်အဓိကအားထားလျှင်, decipher ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ အများစုမှာကျွမ်းကျင်သူများသင်တစ်ဦးကုထုံးကိုမြင်လျှင် start မတိုင်မီကပထမဦးဆုံး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘာမှထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ "တစ်ဦးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအမှုအရာအတော်များများရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအလုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စ, လိင်ပြဿနာတစ်ခုလိုလိင်ကိစ္စ, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်ပြန်၏မရှိခြင်း, "စိတ်ပညာရှင်နိုင်ပါတယ် ဒေါက်တာ Nikki Martinez, Psy.D. , LPCC ကပြောပါတယ်။ "Functional ကိစ္စများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်မပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်ရှိကွောငျးထွက်နေသေးတယ်ပြီဆိုရင်ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပတျဝနျးကငျြစိုးရိမ်စိတ်များဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှာရှာဖွေနေပါတယ်။ "
သငျသညျကြုံနေရပါတယ်ကိစ္စ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး၏ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောနှောပါလျှင်ဒီတော့ဘယ်လောက်သင်သိပါသလော လိင်ကျွမ်းကျင်သူများကိုအောက်တွင်မိမိတို့၏အကောင်းဆုံးအကြံပေးများနှင့်အစွန်းရောက်ဘာမှလုပ်နေတာမရောက်မီဆေးသမားကိုကြည့်ဖို့သေချာပါစေ။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအိပ်ရာထဲမှာကြာကြာနောက်ဆုံးမှဘယ်လိုပေါ်မှာငါတို့ကဗီဒီယိုထုတ်စစ်ဆေး:
1 ။ တစ်ခုစိုက်ထူ Get ဒါမှမဟုတ်ထိန်းသိမ်းပါရန်နိုင်ခြင်း
သင်စဉ်းစားစေခြင်းငှါနေစဉ် ဒုက္ခရတဲ့သို့မဟုတ်ခက်တည်းခိုခေါ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု လူလတ်ပိုင်းသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်သာဖြစ်ပြီးအသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများတွင်ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့နေသဖြင့်ရှက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ လူငယ်များစွာအတွက်ဤပြtheနာသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်အစာအာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းနည်းမှုမှလာနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်တက်ကြွနေပြီးသင်၏ t-level သည်စစ်ဆေးလျှင်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissueနာဖြစ်နိုင်သည်။ ဤပြissueနာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်လိင်ကျွမ်းကျင်သူ၊ Eyal Matsliah ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားသူတို့ကဘယ်လိုပိုပြီးသဘာဝကိုနှိုးဆှမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ masturbating ကြိုးစားသင့်ကြောင်းပြောပြတယ်။ ဒေါက်တာရာခေလသည်အပ်တစ်လိုင်စင်ရစိတ်ပညာရှင်နှင့်လိင်ကုထုံးကုထုံးတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူပါဆုံးယောက်ျားစိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်စေတဲ့ကူညီနိုင်မစည်ကားပြောပြသည်။
2 ။ ပြီးသွားလှနျးလျင်မြန်စွာ
လိင်တံ-In-လိင်အင်္ဂါစဉ်တွင် လိင်ပျမ်းမျှငါးမိနစ်ဝန်းကျင်ကြာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တသမတ်တည်းလျင်မြန်စွာပြီးသွားလျှင်, သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပေမည်။ ဤပြဿနာသည်, သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် hypersensitivity ကြုံနေရခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောတဖြည်းဖြည်းပျော်မွေ့, အစားအားလုံး-မှာ-တစ်ကြိမ်မှမိတ်ဆက်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ "သင်နောက်ဆုံးတော့ သာ. ကြီးအရှည်နှင့်အားသာချက်များမှာလိင်ရှိသည်နိုင်သည်အထိ, သင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပို. ပို. နှိုးဆွကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ရန်သင်ယူဘယ်မှာ '' Sensation အာရုံ '' ဟုခေါ် technique ကိုကြိုးစားပါ," Martinez ကပြောပါတယ်။ ကွန်ဒုံးလည်းလိင်ရှည်ကိုကူညီနိုငျနှင့်သင့်မိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့အချိန်တည်ဆောက်ရန် masturbating ပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းဘဲလျက်။
3 ။ မတိုက်ဆိုင်လိင် Drives
ဒါကြောင့်သင်ကညဦးယံ၌ပြုလုပ်ချင်သူမနံနကျကလိုသည်။ သူတတျနိုငျသလျှင်သူ, နေ့တိုင်းအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ရက်ကချင်ပါတယ်နေချိန်မှာသင်, ကြိမ်ရက်သတ္တပတ်၏လက်တဆုပ်စာကြိုက်တတ်တဲ့ချင်ပါတယ်။ စုံတွဲများအများစုမှာ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ချိန်ချိန်မတိုက်ဆိုင်လိင် drive ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်, ဒါလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ ဤပြဿနာသည်, အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ "ဒီစုံတွဲဟာသူတို့ရဲ့ drives တွေကိုနှင့်လိုအပ်ချက်များအသီးအသီးများမှာအဘယ်သို့သောအကြောင်းဖွင့်လှစ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, ပြီးတော့သူတို့ကအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးသူတို့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းလိင်၏ပမာဏနှင့် ပတ်သက်. OK ကိုခံစားရဘယ်မှာပျော်ရွှင်အလတ်စားရှာတှေ့နိုငျ," Martinez ကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကလည်းဖက်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဂရုစိုက်ဖို့တခြားလုပ်ရပ်များနှင့်အတူလိင်၏အမှန်တကယ်လုပ်ရပ်ဖြည့်စွက်ရန်သဘောတူပါလိမ့်မယ်။ "
4 ။ စိုစွတ် Get ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း
သင်အမှန်တကယ်ဖွင်နေလျှင်ပင်အချို့မိန်းမတို့အဘို့, သင်တို့ကိုချအဲဒီမှာကတူမထင်ပေလိမ့်မည်။ wetness ၏အဆင့်ဆင့် လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်း, သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်တော်တော်လေးခြောက်သွေ့တဲ့နေလျှင်, ကျွမ်းကျင်သူများဤပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုမြင်လျှင်အကြံပြုပါသည်။ ရှိသမျှကောင်းလျှင်, Martinez lube သုံးပြီးဒါမှမဟုတ်ခံစားချက်ပိုမိုသငျသညျအရ foreplay ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းအကြံပြုသည်။ Matsliah လည်းအချိန်ပိုမိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြုန်းသငျသညျဇုန်အရှိဆုံးပေါ်တွင်သင်ဖွင့်အဘယျသို့ထွက်တွက်ဆကိုကူညီနိုင်ပြီး, အရှင်, သင်ညည်းတွားအောင်ဘယ်လိုသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုပြသနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
5 ။ orgasm နိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
သင်တို့ကဲ့သို့ခံစားရလျှင်သင်အရာအားလုံးကိုကြိုးစားနေနှင့်သင့်မိတ်ဖက်အရာအားလုံးကြိုးစားနေသည်နှင့် သင်ဆဲ orgasming မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆကျဆံရေးအပျေါဖျက်ဆီးပါသညျနိုင်ပါတယ်။ "သူမဖက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တတ်နိုင်ကာလ၌အထွတ်အထိပ်၏အမှတ်ရနိုင်မဟုတျပါဘူးလျှင်သင်အမှန်တကယ်အတူတူပါပဲလုပ်ချင်, နှုတ်ဖြစ်, သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဘယ်သို့ဆိုခြင်းနှင့်လိုအပ်သငျသညျတလျှောက်ဒီရွှေ့ကူညီဖို့နိုငျကွောငျး," Martinez ကပြောပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုအိပ်ခန်းထဲမှာအပန်းဖြေ, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်သင်သည်သူတို့လုပ်ပေးထက်အချိန်ပိုမိုလိုအပ်စေခြင်းငှါနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဘို့အလိုကူညီပေးနိုငျသူတစ်ဦးလိင်ကုထုံးရှာဘို့ဒါဟာအစအထောကျအကူဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျော်လွှားရန်သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးဖွစျစေ, ဤကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှက်ဖြစ်ဘာမျှမဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။